समाज सेवामै रमाउन चाहन्छुः प्रकृति ढकाल, मिस लियो प्रतिस्पर्धी – Halkaro
लियो क्लव अफ काठमाडौँ डाउनटाउन र लियो क्लव अफ पोखरा पिस भ्यालीको आयोजनामा भइरहेको मिस लियो नेपाल २०१७ को प्रतियोगिताको फाइनल सोमबार राजधानीमा हुँदैछ । प्रतिस्पर्धाको यो दौडमा सबैको ध्यान यतिवेला प्रकृति ढकालमाथि परेको छ। मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजिमा स्नातक गर्दै गरेकी ढकालले हिडन इको हिरो अवार्ड २०१६जस्तो इन्टरनेशनल अवार्ड पनि जितिसकेकी छन् । फाइनल राउण्डको प्रतिस्पर्धी मध्ये मिस प्रकृति ढकालसँग हलकारो डटकमका लागि आदर्श प्रधानले गरेको कुराकानी :
समाजिक सेवाका क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म मेरो परिवारबाट उत्प्रेरित भएकी हुँ । विशेष गरी मेरो बुवा पनि समाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो । मेरो अग्रजहरु लियो क्लवमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो सुन्दै आएको थिँए । म कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै थिएँ, त्यतिबेला मेरो जन्मदिनको दिन परेको थियो । जुन दिन लायन्स क्लवको बृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका मिल्यो । त्यस कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर म लियो क्लवमा आबद्ध हुन इच्छा भयो । लियो क्लव अफ चितवन सेन्ट्रलको सन् २०१५ मा सदस्य भएर प्रबेश गरेकी थिँए । हाल लियो क्लव अफ भरतपुर चौतारीमा सदस्य भएर सक्रिय रुपमा कार्यगरिरहेको छु । लियो क्लव बाहेक टुन्जा इको नेटवर्क नेपालको एसियन प्यासेफिक रिजनल एम्बासाडोर छु । त्यस्तै उज्यालो नेपालको को–फाउण्डरको रुपमा कार्यरत छु ।
लियो क्लवमा आबद्ध भए पछि के फरक महशुस गर्नुभयो ?
सबैभन्दा पहिला त लियो क्लवमा प्रवेश गरेपछि नामको अगाडी लियो भनेर ट्याग राख्न पाउनु गर्बको कुरा हो । यतिखेर मैले हिडन इको हिरो अवार्ड २०१६ जित्दाको पल सम्झदै छु । जसमा टप सिक्समा नेपाल, अमेरीका, अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, घाना र नाइजेरीया देशहरु छनोट भएको थियो । मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिँए । जब मैले प्रतिस्र्धामा सहभागीहुँदा मैले लियो प्रकृती ढकाल भनेर पोष्ट सेयर गरेको थिएँ । म लियो भएकै कारणले नेपालबाट लायन्स क्लवस इन्टरनेशनलका डिस्ट्रिक्ट ३२५ ए१, ए२, बि१, बि२ सबै मिलेर भोट गर्नुभयो । जसको कारणले अत्याधिक भोटले म सहजै जित्न सफल भए । त्यसैले लियो मेरो लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हो ।
अहिले यहाँ मिस लियो नेपालमा सहभागी हुनुभएको छ । समाजिक क्षेत्रबाट किन मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो ?
मलाई मोडलिङ क्षेत्र अत्यन्त मन पर्छ । तर मोडलको रुपमा लाग्ने भन्ने कुनै चाहना छैन । तर म एक महिला हुँ र महिलालाई मोडलिङको कुराहरु थाहा पाउन जरुरी छ । मोडलिङ भित्र कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी ब्यबहार गर्ने भन्ने कुराहरु सिक्न पाइन्छ । मलाई परिवारका सदस्यहरुले पनि मिस नेपालमा सहभागी हुनको लागि भनिरहनु हुन्थ्यो । म पनि आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन पछि जाने सोचमा पनि छु । अहिले जब मैले मिस लियो नेपाल २०१७ को प्रतिस्पर्धा हुदैछ भनेर थाहा पाए । म पारिवारकै सल्लाहमा सहभागी पनि भए ।
मिस लियोमा कसरी प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गर्नुभयो ? मिस लियोको टे«निङ सेसनको अनुभव पनि बताउनुस न ?
म पोखराबाट १ महिनाको बिदामा चितवन आएको थिए । त्यति बेला लियो क्लवको मिटिङ मिस लियो हुँदैछ भन्ने जानकारी पाए । तर म जान चाहेको थिइन । मेरो बुवा पनि लायन्स क्लवमा आबद्ध हुनुहुन्छ । त्यहि भएर उहाँले लियोको प्रतिस्पर्धा हो जानु धेरै कुरा सिक्नेछौं भन्नुभयो । उहाँले नै मलाई चितवन अडिसनमा लानुभएको थियो ।
जब मैले चितवन अडिसनमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरें । जजहरु खुशी भएर तिमी मिस लियो जित्न लायक छौ भनेर आफ्नो मार्क आफै दिउ भनेर पेपर नै मलाई दिनुभयो । म छानिन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए । चितवनबाट म समेत गरेर ३ जना छनोट भयौं ।
त्यस पछि मिस लियोको टे«निङ सेसनमा आए । त्यहाँ आउँदा सबै छानिएका प्रतिस्पर्धीहरुलाई देख्ने मौका मिल्यो । धेरै जसो प्रतियोगिहरु मोडलिङ क्षेत्रबाट आउनुभएको रहेछ । तर मैले आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफै बाहेक कसैमा पाइन । कोरियोग्राफर पुजा श्रेष्ठको मोडलिङको अनुभबले मलाई धेरै उत्प्रेरित गर्यो । धेरै राम्रो खालको प्रशिक्षकहरुबाट महत्वपूर्ण कुराहरु सिक्न पाए । मलाई नृत्य गर्न, वाक गर्न आउँदैन्थ्यो जुुन यस प्रतियोगीतमा आएर सिक्न पाए । आफूभित्र रहेको कजोरीहरुलाई राम्रोसँग चिनेर सुधार्ने मौका पनि पाए । समग्रमा भन्नु पर्दा मैले मिस लियोमा धेरै कुराहरु सिक्न पाए । लियो समाजिक संस्था भएकोले यहाँ फेसन, मोडलिङका कुराहरु मात्र नभई सामाजिक सेवाहरुको पनि कुराहरु हुन्छ ।
भबिश्यमा कुन क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ?
म मेडिकल बिद्यार्थी भएको कारणले म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम अबश्य गर्नेछु । त्यसको साथै महिला प्रजनन स्वास्थ र ग्रिन इन्भारमेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ ।
तपाई मोडलिङ क्षेत्रमा आउने सम्भावना कत्तिको होला ?
म मिस लियो जितेँ या नजिते पनि म मोडलिङ क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने चाहना छैन । मोडलिङ क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर चेतनामूलक, उत्प्रेरणामूलक काम भने गर्नेछु । म अरु धेरै महिलाहरुको लागि प्रेरणा बन्न चाहन्छु ।
तपाईले सुन्दरतालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
सुन्दरता बाहिर देखिने मात्र नभएर भित्रि सुन्दरता पनि चाहिन्छ । भित्री र बाहिर दुबै सुन्दरताले मानिसलाई थप सुन्दर बनाउँछ ।
तपाइलार्ई प्रेमको अनुभव कस्तो छ ?
निश्चय नै प्रेम बिना केही सम्भव छैैन । आजसम्म म जुन स्थानमा पुगेको छु त्यसको पछाडी कसैको प्रेम छ । मेरो हरेक दुखसुखमा राम्रो साथ पाएकोछु । बुवा आमा, परिवारको पनि अगााध प्रेममा छु ।
← अमेरिकामा तुलसी दिवसको सम्मान तथा कवि शिखर दुलालको पुस्तक लोकार्पण
कारखाना अनुभव ( फिल्मी चाैतारीमा वर्षा र शुशीलको जोडी भिडियोसहित) →